Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 14/06/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 14/06/2019
(နေပြည်တော်၊ ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်)
Union Minister Dr. Win Myat Aye receives EU Special Representative for Human Rights
Naypyitaw June 13
Union Minister Dr. Win Myat Aye received the delegation led by Mr. Eamon Gilmore, the European Union’s Special Representative for Human Rights on 13 June 2019 at the ministry in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they discussed on the status of coordination among Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine State (UEHRD) as well as relevant committees, Union government and state government towards stability, peace and development in Rakhine State, latest status of receiving returnees from Bangladesh, status of cooperation by ASEAN countries in the repatriation process, status of drawing up and completinganational level strategy to close relief camps for displaced persons from all over Myanmar and matters relating to peace process.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Eamon Gilmore ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် UEHRD အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအသီးသီးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသော နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်နေမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေများ၊ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် အနေအထားနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများကို ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေမှု ပြီးစီးတော့မည့်အခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။